Njirimara bara uru | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Atiya Njirimara bara uru
Kedu ihe Brazil na-etinye na ọ bara uru maka ụmụ nwanyị
Ikekwe ọtụtụ n'ime anyị maara Brazil akụ - a na-achọta ụdị nri a n'ebe niile, ebe ọ bụ na ọ chọpụtawo ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile. Enwere ike iji ya naanị ya ma ọ bụrụ na ị ga - arụ ọrụ zuru oke na ụdị nnu dị ụtọ. Otú ọ dị, ọ bụghị ọtụtụ ndị maara na, ma e wezụga atụmatụ bara uru maka ndị na-anụ ụtọ ahụ, ero a nwere ọtụtụ ụyọkọ ihe bara uru maka ahụ nwanyị.
Brazil nut - ihe bara uru
Bertoletija bụ ụdị mkpụrụ osisi nke mkpụrụ osisi, nke a na-ekesa na South America. Nanị ụdị nke ọdịdị a bụ ogologo billet, nke a maara ụwa dum n'okpuru aha "Brazil nut". Mkpụrụ nke osisi a dị oke buru ibu dị ka nri. Ọ bụ ezie na ịkpọ ngwaahịa a, nchịkọta anaghị edozi ya, n'ihi na ọ bụ na a kpọrọ ya ọka.
Olee otú pistachios si bara uru
Osisi nke ndu di. Nke a abughi ihe efu nke ndi dere akwukwo na ndi ozo bu ndi ozo, obughi ihe na-ewusi ndu site na akwukwo nso, mana ndi amara pistachios. Kemgbe ọtụtụ puku afọ, osisi ndị a na-ahụ maka okpomọkụ na-enye ụmụ mmadụ mkpụrụ osisi dị oké ọnụ ahịa, nke na-ejikọta ọnụ ụtọ dị mma na uru bara uru.
Kruporushka (rushka) maka ọka na-eme ya n'onwe gị
Ụzọ aghụghọ nke nkwadebe maka oyi nke pickled green tomato. Ntụziaka dị ụtọ na ngwa ngwa
Kedu esi agba Kalina: Atụmatụ agronomists
Atụmatụ maka ọgaranya owuwe ihe ubi: otú e si eri nri tomato seedlings nke mere na ha nwere plump na-eguzogide ọgwụ ị ga?
Onyinye si Germany - "Krona" poteto: àgwà nke dịgasị iche iche na ndụmọdụ bara uru
Kedu ihe bụ plum: beri ma ọ bụ mkpụrụ osisi?
Akwukwo apụl dị iche iche a ma ama
Bath: Sadim ma na-elekọta "
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Njirimara bara uru